विराटनगरको “वेबसफ्ट आईटी नेपाल” मुलुककै टप टेनमा – Janacharcha.com
» प्रविधि अंक: 662
विराटनगरको “वेबसफ्ट आईटी नेपाल” मुलुककै टप टेनमा
विराटनगरको वेबसफ्ट आईटी नेपाल प्रा.ली. नेपालकै टप टेन वेबसाईट होस्टिङ कम्पनीको लिष्टमा पर्न सफल भएको छ । अमेरीकाको डब्लु.एच.टप नामक एक संस्थाले गरेको अनुसान्धानका अनुसार वेबसफ्ट आईटी नेपाल प्रा.ली. नेपालको उत्कृष्ट होस्टिङ कम्पनीेहरुको ९ औं नम्बरमा परेको हो । सेवाग्राहीलाई दिएको प्रतिफल र एलेग्जा -याङ्किङको आधारमा नेपालको टप टेन होस्टिङ कम्पनीको नाम सार्वजनिक गरिएको डब्लु.एच.टपले जनाएको छ ।
वेबसफ्ट आईटी नेपालको अफिसियल वेभसाईट (www.websoftitnepal.com) हाल एलेग्जाको नेपाल -याङ्किङमा ९६० औं स्थानमा छ भने अन्तराष्ट्रिय -याङ्किङमा १० लाखभन्दा मुनि रहेको छ ।
नेपाल टेलिकमको ‘एनटी च्याटबोट’ सुचारु
एसपीको फेसबुक ह्याक गरी पत्रकार सँग रकम माग